ဝိတ်ကျသွားပြီး လိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားရရှိစေဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရာဇသံပေးပြီး ကြိမ်းမောင်းခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု - Cele Connections
လူကောင်သေးသေးလေးနဲ့ အရမ်းလှတဲ့ မင်းသမီးလေး ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်ထက် ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အနုပညာအရည်အသွေးကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ပါ။ ပိုင်ဖြိုးသုက “3 Girls” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတစ်ခုကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသလို “မီ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့လည်း Star Award ဆုကြီးကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုကလည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မရိုးနိုင်တဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ချပြဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ရိုက်ကူးရေးတွေ ရပ်နားထားချိန်မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက နောက်ထပ်ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် လိုအပ်တဲ့ကာရိုက်တာကို ရရှိဖို့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုက “အေး….ပိုင်ဖြိုးသု။ နင်နဂိုဝိတ်ပြန်မရမချင်း ဘာအဝတ်အစားမှဝယ်မပေးဘူး။ ဘာမုန့်မှလည်းဝယ်မကျွေးဘူး။ လိုချင်ရင် စားချင်ရင် ဝိတ်ရအောင်ချ!!!! (ဖိနပ်လေးတွေမှာထားတာကတော့ပိန်ပိန်ဝဝဝတ်လို့ရနေတာဆိုတော့ရှိပါစေတော့ 😜)” ဆိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရာဇသံပေးပြီး ကြိမ်းမောင်းခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်တာကိုလည်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ကြိုးစားသလို လိုအပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား၊ အပြင်အဆင်တို့ကိုလည်း လိုအပ်သလို ပုံသွင်းယူတတ်သူလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဝိတျကသြှားပွီး လိုခငျြတဲ့ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားရရှိစဖေို့အတှကျ ကိုယျ့ကိုကိုယျရာဇသံပေးပွီး ကွိမျးမောငျးခဲ့တဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
လူကောငျသေးသေးလေးနဲ့ အရမျးလှတဲ့ မငျးသမီးလေး ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမရဲ့ ရုပျရညျထကျ ပွောငျမွောကျလှတဲ့ အနုပညာအရညျအသှေးကွောငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ နာမညျကွီးသူတဈယောကျပါ။ ပိုငျဖွိုးသုက “3 Girls” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုတဈခုကိုလညျး ရရှိပိုငျဆိုငျထားသလို “မီ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့လညျး Star Award ဆုကွီးကို လကျဝယျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ပွညျသူခဈြမငျးသမီးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပိုငျဖွိုးသုကလညျး သူမရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ မရိုးနိုငျတဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ခပြွဖို့ ကွိုးစားနသေူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိ ရိုကျကူးရေးတှေ ရပျနားထားခြိနျမှာတော့ ပိုငျဖွိုးသုက နောကျထပျရိုကျကူးမယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးအတှကျ လိုအပျတဲ့ကာရိုကျတာကို ရရှိဖို့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခနြရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ပိုငျဖွိုးသုက “အေး….ပိုငျဖွိုးသု။ နငျနဂိုဝိတျပွနျမရမခငျြး ဘာအဝတျအစားမှဝယျမပေးဘူး။ ဘာမုနျ့မှလညျးဝယျမကြှေးဘူး။ လိုခငျြရငျ စားခငျြရငျ ဝိတျရအောငျခြ!!!! (ဖိနပျလေးတှမှောထားတာကတော့ပိနျပိနျဝဝဝတျလို့ရနတောဆိုတော့ရှိပါစတေော့ 😜)” ဆိုပွီး ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကသြှားဖို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျရာဇသံပေးပွီး ကွိမျးမောငျးခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှော သရုပျဆောငျတာကိုလညျး အံဝငျခှငျကဖြွဈအောငျ ကွိုးစားသလို လိုအပျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစား၊ အပွငျအဆငျတို့ကိုလညျး လိုအပျသလို ပုံသှငျးယူတတျသူလေးတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။